Miyuu iskudhafka Australian Shepherd Blue Heeler adiga kugu habboon yahay? - Taranka
Maxaad heleysaa markaad ka gudubto laba ka mid ah noocyada xoolaha ee ugu caansan? Tan oo tamar ah iyo sirdoon aan cidi u dhigmin, waa taa!
The Iskuxidhka Australiyaanka Shepherd Blue Heeler waxay ku socotaa magacyo dhowr ah: Buluuga Heeler ee Australia, Texas Heeler, Australian Heeler, iyo Queensland Heeler Australian Shepherd mix , in aan xuso dhawr.
Sii wad aqrinta dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay inaad ka ogaato isku-dirkaan cajiibka ah!
Waa maxay labada nooc ee sameeya Texas Heeler?
Sidee ayuu Texas Heeler u eg yahay?
Dabeecad: Texas Heeler ma yahay eey qoys oo wanaagsan?
Daryeelkaaga isku-darka Aussie Shepherd Blue Heeler
Bulsho Heeler Bulshooyinka Australiyaanka ah ma caafimaad qabaan?
Raadinta Ey-ga Texas Heeler ee iibka ah
Waad jeclaan doontaa iskudhafyadaan kale ee xoola dhaqatada ah
Miyuu isku darka isku-duwaha reer Australia ee Shepherd Blue Heeler ku biiri doonaa xirmadaada?
Waxaa lagu horumariyey Texas sannadihii 1970-yadii, Texas Heelers waxay ahaayeen shaqeysiiyay maalintii oo dhan, maalin kasta. Maaha wax lala yaabo in noocani isweydaarsiga ah inta badan laga helo amaah gacan ka geysasho xoolaleyda.
Isugeyn ahaan, isku darka Aussie Shepherd Blue Tick Heeler ma aqoonsana Naadiga Kennelka Mareykanka (AKC). The Diiwaanka Eyga ee Mareykanka (DRA) iyo kan Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka (ACHC) labaduba waxay aqoonsan yihiin nooca, si kastaba ha noqotee.
Si dhab ah loo fahmo waxa ka dhigaya iskudhafkan, waxaan u baahannahay inaan baranno farcankiisa waalid. Aynu si qoto dheer u eegno Adhijirka Ustaraaliya iyo Eyga Ustaraaliya.
Baro adhijirka Ustaraaliya
Adhijirka Australia , ama Aussies , waa caan ku ah awooddooda xoolo dhaqashada . Xididdadooduna waxay gaadhayaan dhammaanba ilaa Buuraha Pyrenees ee Yurub, halkaas oo awoowayaashoodii ugu horreeyay ay u adeegeen sidii wehel xoolayaal ah.
Markay ahayd 1800-yadii, Adhijirka reer Australia ee casriga ahi waxay magac u yeesheen nafsad ahaanteed (macno ahaan!) Badweynta ka baxsan Dibedda Australia.
Muddo aan dheereyn kadib, jaangooyooyinkan waxaa loo soo dhoofiyay Mareykanka. Beeraleyda iyo xoolaleyda Galbeedka Mareykanka isla markiiba waxay qaateen nacaybkan shaqeynta ah, inta soo hartayna waa taariikh.
Weli waxaad arki doontaa Adhijirka reer Australia oo ka shaqeeya dhul beereedka Mareykanka. Kuwa ay ciyaaraha fudud iyo wadista iyaga ayaa ka dhigaya iyaga musharixiin heer sare ah oo ku saabsan kacdoonka iyo u hoggaansamida tijaabada, sidoo kale .
La kulan Eyga Lo'da Australia, AKA Blue Heeler
Yaanay naanaysyadu ku wareerin. The Eyga Ustaraaliya iyo Blue Heeler waa isku nooc! Waxa kale oo aad maqli kartaa canaankan loo yaqaan a Queensland Heeler ama Australian Heeler .
Eeyaha Lo'da Australiya, sida Aussie Shepherd, ayaa lagu sifeeyay Land Down Under. Halkan, iyagu waxay ku heshay sumcad cibaado iyo adkaysi .
Si ka duwan dhiggooda canine, si kastaba ha noqotee, geed-bulsheedka Blue Heeler wuxuu leeyahay dhowr laamood oo dheeri ah.
Blue Heelers waa farac ka mid ah Smithfield , nooc ka mid ah xoolaha ingiriiska oo loo soo dhoofiyo Australia.
Markii Smithfields uu la halgamay inuu la qabsado jawiga adag, waxaa lagu soo dhex dhexlay noocyo badan oo cufan, sida Isboortiga Highland ee Iskotishka iyo Sigaarka .
Laakiin hal-abuurnimadu halkan kuma joogsato! Dalmatians iyo Kelpies markii dambe lagu dhex tuuray iskudhafka, oo na siinaya maanta Eyga Lo'da Australia.
Sida laga yaabo inaad qiyaastay, muuqaalka Australian Blue Heeler wuu ka fogyahay jaangooyada.
La kulan Ozzy iyo Phinea, Texas Heelers - Isha sawirka
Waa wax goos goos ah in la helo Texas Heelers oo u eg isku mid, xitaa isla qashin isku mid ah!
Waxay had iyo jeer ku faanaan Australian Cattle Dog’s jir muruq ah oo leh dhegaha kor u foorarsan ama foorarsanaya iyo sanka madow.
Indhahoodu way wareegsan yihiin oo yeelan kara buluug dhalaalaya, midab madow oo mugdi ah, ama isku dar ah labadaba.
Qaarkood waxaa laga yaabaa inay leeyihiin midab midab oo indhaha ah oo ka duwan kan kale sida Aussies ay yeelan karto heterochromia .
Isku darka Blue Sheeler Australian Shepherd waa badanaa ku dhasha bobtail , laakiin waxay yeelan karaan dabo dheer.
Ma ogtahay eyda leh Dabolaha xarkaha leh ayaa calaamad u ah hiddahooda dhaxal ahaan inay yihiin nooc shaqeeya ?
Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mas'uuliyad markay leeyihiin dabada buuxda markay daaqayaan kooxo waaweyn, sidaa darteed noocyo badan ayaa u xuubsiibtay inay yeeshaan dabo gaagaaban.
Intee ayey la egtahay isku darka daaqa reer Australia ee 'Blue Sheeler Blue Heeler'?
Taagan 17 ilaa 22 inji (43 ilaa 56 cm) iyo miisaan 45 illaa 55 rodol (20 ilaa 25 kg) markii si buuxda loo koray, Australian Blue Heeler waa cabirka ugu fiican ee isku soo uruurinta xoolaha.
In kasta oo Texas Heelers dhadig laga yaabo inay waxyar kayartahay, haddana waxaa aad u yar farqiga u dhexeeya labada jinsi.
Texas Heelers oo leh a Shepherd yar oo Australian ah waalidka, si kastaba ha noqotee, badanaa waxay leeyihiin dhisme macaan.
In kasta oo ay yar yihiin ama dhexdhexaad yihiin, isku darka lo'da ee loo yaqaan 'Cattle Dog Australian Shepherd' waxay u baahan yihiin qol ku filan oo ay ku ordaan. Dayrka weyn, ayaa ka fiican!
Laakiin waxaan kugula talineynaa tixgelinta taariikhdooda, sidaas darteed waa inay ku noolaadaan meelaha miyiga ah, sida xeryaha iyo beeraha .
Noocyada jaakadaha & midabada isku dhafka Blue Heeler Australian Shepherd
Caadi ahaan waxay leeyihiin a jaakad laba-gaaban oo dherer-dhexdhexaad ah - jubbadda u adkeysata cimilada iyo jaakad cufan.
Qaar ka mid ah iskutallaabyada 'Australian Shepherd-Cattle Dog' waxay leeyihiin timo toosan ama lulaya oo siman, laakiin kuwa kale waxay leeyihiin dhogor u eg inay adkaato.
Noocani wuxuu ka kooban yahay iskudhaf madow, caddaan, bunni, midab buluug ah, midab buluug ah, iyo meeris cas .
Waxay si isdaba joog ah u ciyaaraan xariijimo cad foodda hore ilaa afka, maaskaro, dhejisyo, dhibco, iyo googo'aan midabbadaas ah.
Isku darka Queensland Heeler Aussie Shepherd maaha mid qalbi jilicsan. Laf kasta oo jirkooda ka mid ah waxay u heellan tahay shaqo adag iyo dhaqashada xoolaha.
La kulan Roscoe, Australian Blue Heeler - Isha sawirka
Sidan oo kale, waxaad filan kartaa firfircooni, caqli-gal caqli-gal ah. Taasi waa sababta ay u sameeyaan asxaabta wanaagsan ee qoysaska kuwaas oo ku raaxeysta banaanka oo firfircoon.
Sida xoola dhaqatada, Texas Heelers waa si dabiici ah u ilaaliya . Caadi ahaan ma arki doontid iyaga oo saaxiibo deg deg ah la sameeya shisheeyayaal ama xayawaan aan la aqoon.
Sababtaas awgeed, isdhexgalka joogtada ah waa lagama maarmaan. Buluugaaga Heeler-ka Australiyaanka ah wuxuu u baahan yahay fursado isdaba joog ah oo uu kula macaamilo dadka kale iyo eeyaha.
Haddii xayawaankaagu uusan helin soo-gaadhistaan, u janjeedha ilaalinimadooda ayaa noqon karta mid xad dhaaf ah.
Warka fiicani waa in Aussie Shepherd Blue Heeler ay isku qasmaan dhif iyo naadir sabab la’aan . Waxay sidoo kale si la yaab leh saaxiibtinimo u leeyihiin xirmooyinkooda.
Inta udhaxeysa daacadnimo iyo tamar sare , Cunnadan isweydaarsiga ah waxay la baashaali kartaa qoyska oo dhan – xitaa carruurta 'kiddos'!
Waxaa muhiim ah in la ogaado, in kastoo, dareenka Australiya ee Heeler uu noqon karo barako iyo habaar.
Waxaan ka digeynaa inaan u keeno cunuggaan yar yar. The jirrabaadda iyo cayrsashada waa xoog badan yahay.
Waxaad ubaahan doontaa inaad kormeerto waqtiga ciyaarta caruurta yar yar sababtan oo kale. Fido way ku khaldami kartaa iyaga oo ido ah!
Nasiib wanaagse, Texas Heelers waxay si fiican uga jawaab celiyaan hoggaanka wanaagsan. Waxay ujeedadoodu tahay inay ka farxiyaan, oo dhaqso ayey wax u bartaan . Milkiilayaasha khibrada leh maahan inay wax dhibaato ah kala kulmaan hagida shakhsiyadan firfircoon ee isku dhafan.
U fiirso sida aabbaha eygan isu geeyo a guji , daweeyo , iyo amaan inuu ku abaalmariyo ardaygiisa Texas Heeler shaqo si fiican loo qabtay. Fadlan waxoogaa qaado si aad ugu raaxaysato Maggie-15-toddobaad jirta oo tusaysa xeeladeeda qabow ee fiidiyowgaan!
Isku darkaaga Queensland Heeler Aussie waxay jeclaan doontaa tababbarka wax ka badan koolkoolinta. Madax banaan oo caqli badan, eeyahaani waa kuwa ugu farxada badan markay dhaqaaqayaan oo shaqeynayaan.
Immisa jeer ayaad u diyaarinaysaa Texas Heeler-kaaga? Immisa jimicsi ayeyna u baahan yihiin? Jawaabaha laga yaabee inaad la yaabto!
Laakiin looma baahna in laga walwalo. Iyagu waa eeyo naqshadeeye dayactir yar.
Immisa jeer ayaad u diyaarinaysaa Texas Heeler-kaaga?
Haddii ay dhacdo inaad isweydiiso, Australian Shepherd Blue Heeler mixs do shed. Iyagoo wata jubbadohooda oo buuxa iyo daadinta sanadka oo dhan , Kuwani waxay ku saabsan yihiin sida aan-hypoallergenic sida eey u heli karo.
Weli, noocani isweydaarsigu uma baahna is qurxin culus. 2 ilaa 3 jeer usbuucii badiyaa waa ku filan tahay, laakiin marwalba waad cadaadin kartaa marar badan, gaar ahaan haddii saaxiibkaa dhogorta leh uu leeyahay timo dheeri ah.
Waxaad sidoo kale siin kartaa Heeler-kaaga Australiya timo qafiif ah si aad u goyso (ciqaab looguma talogelin) guud ahaan waqtiga qurxinta. Kaliya HA xiiran!
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad si joogto ah u maydho marka loo eego waxyaabaha kale ee laysku daro, gaar ahaan haddii ay si caadi ah banaanka u shaqeeyaan. Ma rabto shaambo iyaga qubeys kasta leh, in kastoo.
U kaydi suufka xoqitaan buuxa 6 ilaa 8 usbuuc kasta ugu badnaan . Waqtigan xaadirka ah, ku tiirsan maydhashada biyaha si aad uga soo xidho wasakhda ama dhoobada.
Intaad xoqayso dhagaha Fido, ka hubso calaamadaha xanaaqa ama infekshinka. Ku masax maro nadiif ah ama masaxa in laga saaro wixii qashin ah.
Si aad kor ugu qaado jadwalkaaga quruxda badan ee Buluugga ah ee Heeler, cadaya iyaga ilkaha laba jeer usbuucii oo ciddiyaha iska jar 1 ilaa 2 jeer bishii .
Immisa jimicsi ayey Australian Heelers u baahan yihiin?
Haddii Texas Heeler-kaaga ay iyagu lahaayeen, waxay ku maqnaan lahaayeen bannaanka oo kala fidinaya xubnahooda qorrax ka soo baxa ilaa qorrax dhaca. Hadday u muuqato xad-dhaaf, qorshee ugu yaraan 60 illaa 90 daqiiqo maalintii , ama 14 mayl asbuucii.
Maskaxda ku hay in tani ay tahay ugu yaraan bareer ah isku darka Marka laga hadlayo dhaqdhaqaaqa jirka, inbadan ayaa had iyo jeer ka fiican.
Ma isweydiineysaa inaad sii wadi karto? Aussie Blue Heelers qasab maahan inay ubaahantahay bini aadamkooda inay si toos ah u siiyaan jimicsi. Waxay kaliya kaaga baahan yihiin inaad fursad siiso.
Iyaga oo la siiyo shaqo ay qabtaan waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu bixiyo kicinta maskaxda iyo jidhka ee ay jecel yihiin.
Ma haysato xoolo si caadi ah u wareegaya daaradda gurigaaga? Bar isku darkaaga 'Aussie Shepherd Blue Heeler mix' inuu kaa caawiyo guriga dhexdiisa.
Haddii kale, maahan wax la maqlo oo laga kireysto eeyaha shaqeeya beeraleyda maxalliga ah.
Haddii taasi aysan ahayn ikhtiyaar meesha aad ku nooshahay, u rog ilmahaaga dabacsan deyr aamin ah oo daawado isagoo ordaya! Ku dar ciyaaraha maskaxda iyo kalfadhiyada tababarka si aad si dhab ah uga daasho foojigan.
Xitaa waad siin kartaa isaga a tooy u eg xayawaan si loo qanciyo baahidiisa in la eryo.
Marka la eego quluubtooda, isku darka Queensland Heeler Australian Shepherd wuxuu qadarinayaa xoogaa cusub hal mar. Xor ayaad u tahay inaad beddesho jimicsigooda oo aad siiso khibrado cusub.
Texas Heelers way u dulqaadan karaan xaaladaha cimilada kala duwan, oo ay ku jiraan kuleylka daran. Maxay taasi adiga kuu tahay? Ikhtiyaarrada, saaxiibkay!
Isku-dhafkan wuxuu u qaataa isboortiga cayaaraha sida firfircoonida, duulimaadka, iyo isu soo baxa waqti la'aan. Ma jiro koorso firfircoon ee doggie kuu dhow? Baakad biyo badan oo macaan, oo Fido u qaad safar.
Australian Heelers sidoo kale waa dabbaasha dabaasha. Ma jiraan wax ka mamnuucaya xayndaabkan adag!
Cuntada iyo quudinta: meeqa kibble ayaa aad u badan?
Celcelis ahaan, Aussie Blue Heelers ayaa u baahan 2.5 ilaa 3 koob cuntada maalintii, ku faafay in ka badan laba illaa saddex cunto. Haddii ardaygaagu firfircoon yahay ama uu leeyahay dhisme ballaadhan, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad kordhiso qaddarkan.
Texas Heelers waxay cuni karaan cunnooyinka eyda loo sameeyay nooc dhexdhexaad ah ama weyn. Waxaad ubaahantahay inaad hubiso kibibkoodu inuu leeyahay ugu yaraan 20% borotiin .
Ogsoonow in isku darka lo'da ee 'Australian Shepherd' ay noqon karaan kuwa wax cuna. Tixgeli inaad iibsato tiro yar oo cunto ah illaa aad ka hesho nooc nafaqo leh oo ku habboon dhadhanka cunugaaga.
Australian Blue Heelers marar dhif ah ayey ku dhashaan xaalado caafimaad oo daran. Daryeelka saxda ah, cimrigoodu wuu dheeraan karaa 12 ilaa 16 sano !
Tani macnaheedu maahan in Texas Heelers aysan horumarin karin xaaladaha caafimaadka, in kastoo. Haddii saaxiibkaaga canine uu si joogto ah u daaqo, wuxuu halis weyn ugu jiraa xusulka iyo sinta dysplasia xirashada iyo jeexitaanka awgeed.
Xaaladaha indhaha , sida Progressive Retinal Atrophy (PRA), Collie Eye Anomaly (CEA), iyo cataracts, ayaa horumari kara inta eygaagu sii gaboobayo.
Intaa waxaa sii dheer, isla hiddo-wadaha Aussie Blue Heeler siiya jaakadooda meeriska ah ayaa sidoo kale sababi kara dhago la'aan . In kasta oo kani aanu ahayn dammaanad, haddana waa wax dhici kara, markaa waxa ugu wanaagsan in laga digtoonaado.
Dhibaatooyinka kale ee caafimaad ee isku darkaaga Blue Heeler Australian Shepherd ayaa laga yaabaa inay yihiin hargab , osteochondritis dissecans, suuxdin, iyo sanka Collie ama Discoid Lupus Erythematosus (SIDA LAGA SOO XIGTAY)
La kulan Luna, Eeyga Texas Heeler - Isha sawirka
Inta badan isku darka 'Shepherd & Blue Heeler' ee Australiyaanka ah badanaa waa qaali $ 800 iyo wixii ka dambeeya . Ahaanshaha eey naqshadeeye naadir ah, noqoshada isku-dhafka la jecel yahay ee shaqada beeraha iyo hidde-wadaha ayaa qiimaha sare u qaadi kara.
Intee in le'eg ayaad bixin doontaa sidoo kale saameyn ku yeelan kartaa jinsiga ardayga, muuqaalka, iyo abtirsiga waalidiinta.
Waxaa laga yaabaa inaad ku kala jabto inta u dhexeysa adeegsiga breeder ama aad korsato Texas Heeler. Aynu baarno labada ikhtiyaar si aad u gaarto go’aanka ugu fiican.
Australian Shepherd Blue Heeler iskudhafayaasha
Noocan isku dhafan ayaa caan ku ah Texas, laakiin waxaad ka heli kartaa Texas Heeler pups oo ka baxsan Lone Star State.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad safarto, markaa qorshee sida ku habboon. Ma doonaysid inaad ku dul-degtid guri booqasho iyo la kulan-iyo-salaan oo ay la socdaan arday. Hubso in waqtiga iibsigaaga iyo koontada miisaaniyadda ee tan.
Waxaa haboon in la waydiiyo kuwa soo saari kara inay bixiyaan dammaanad qaadka caafimaadka intaadan wadada gaarin. Waxaad ubaahan doontaa dukumintigan si kastaba ha noqotee, markaa waxaad sidoo kale waydiisan kartaa waqti hore.
Haddii abuuriyuhu uusan bixin karin ama uusan bixin karin, waxaad dadaalkaaga u wareejin kartaa meel sumcad leh.
Diyaar ma u tahay inaad bilowdo? Halkan waxaa ku yaal dhowr ka mid ah kuwa kugu habboon ee aad iska hubin karto:
Lo'da CrossBow (Jacksonville, FL)
Badbaadinta Eyga Aussie-Australian
Qaar ka mid ah eeyaha jecel waxay doorbidaan inay korsadaan halkii ay ka adeegan lahaayeen. Haddii taasi kuu muuqato, waad ku farxi doontaa inaad ogaato inay jiraan dad badan oo ah Australian Shepherd iyo Dog ka samata bixinta Lo'da Australiya oo dhan!
Markaad dooranaysid qashin samatabbixin ah, ula dhaqan geedi socodka sidii aad uga iibsan lahayd ilaaliye.
Si shakhsi ah u booqo hay'adda samatabbixinta. Gaar ahaan haddii aad korsato eey ka weyn, waxaad u baahan doontaa inaad marka hore la kulanto. Sidee kale oo aad ku ogaan doontaa haddii shakhsiyaadkaagu wax sheegaan?
Hubso in hoyga uu horay u maareeyay booqashooyinka dhakhtarka xoolaha ee hore iyo tallaalada, sidoo kale. Ma ogaan doontid wax walba oo ku saabsan badbaadintaada ardayga taariikhda, laakiin daryeelkan yar ee dheeraadka ah wuxuu iyaga siinayaa lug caafimaad-caqli leh.
Waan ognahay inaad ka walwalsan tahay inaad siiso Australian Blue Heeler gurigooda weligiis ah, sidaas darteed waxaan diyaarinay liistadan badbaadinta si ay kaaga caawiyaan dibedda:
Badbaadinta Eyga Texas (Fort Worth, TX)
Ururka Badbaadinta Eyga Australia (Beerta Magaalada, NY)
Adhijirka reer Australia ee Furever (Rancho Cucamonga, CA)
HeRD ee WY, Inc. (Sheridan, WY)
Hadal! St. Louis (Troy, IL)
Iyada oo naqshadeeyeyaal badan oo cajiib ah halkaas ku sugan yihiin, way adkaan kartaa in la doorto. Haddii aadan weli go'aan gaarin, halkan waxaa ku jira xitaa iskudhaf badan oo la tixgeliyo.
Isku dhafka Shepherd Lab ee Australiyaanka ah
La kulan Honey, Isku-darka Sheybaarka Shepherd ee Australiyaanka ah - Isha sawirka
Aussiedors waxay ku fiican yihiin qoysaska xayawaanka badan. Isugeynta Labrador Retriever’s saaxiibtinimo leh dabeecadda go-getter-ka ee Aussie, isku-dhafkan ayaa ah habka loogu talagalay madadaalo!
Isku darka Shepherd Poodle ee Australiyaanka ah
Mee isku darka Poodle Shepherd Australian
Xasaasi u ah timaha xayawaanka? The Aussiedoodle waxay noqon kartaa waxaad ubaahantahay! Iyada oo ay Poodle’s hiddo-wadayaasha hypoallergenic, Aussiedoodles ayaa ah beddel hoose oo weyn oo daadin ah. Xitaa waad heli kartaa a Mini Aussiedoodle haddii noocyada yaryar ay ku habboon yihiin waxa aad jeceshahay.
Isku darka Dog Corgi ee Australia
La kulan Mochi, iskudarka Australia ee Lo'da Dog Corgi - Isha sawirka
Loo yaqaanay Cowboy Corgi , Noocan isweydaarsiga ah waa wax la jeclaado – waana mid murugaysan. Sawir muujinta astaamaha Heeler iyo gaaban Corgi lugaha. Lammaanahaas oo leh qashin-qubka 'Corgi', oo waxaad haysataa foorar jeebka ku jira oo leh shakhsiyad weyn!
Isku darka Xuduudaha eeyaha Lo'da Australiyaanka ah
La kulan Dax, Xudduudaha Dog Xudduudda Australiya ee Collie - Isha sawirka
Kulliyadaha Xuduudaha ayaa loogu magac daray noocyada ugu caqliga badan adduunka. Caqligooda oo lagu daray shucuurta Blue Heeler? Haddii aad suuqa ugu jirto eey aad u qurux badan oo leh sirdoon heer sare ah, ha u sii eegin meesha Xuduudaha Heeler .
Isku duwaha Australiyaanka ah ee Shepherd German Shepherd mix
La kulan Mila, Australian Shepherd German Shepherd mix - Isha sawirka
Sidoo kale loo yaqaan Jarmalka Adhijirka Australiyaanka ah ama Jarmal Aussie , Noocan isweydaarsiga ah waa mid la jeclaan karo haddana aad u karti badan. Waad isku halleyn kartaa Isku dhafka Jarmalka Shepherd Australian hawl kasta, shaqo kasta, ama isboorti kasta.
Haddii haysashada harka cannigu uusan ahayn arrin, tani waxay noqon kartaa wehel firfircoon adiga.
La kulan Bomber, isku darka Australian Shepherd Blue Heeler - Isha sawirka
Texas Heelers waa ey shaqeynaya . Daal la'aan iyo geesinnimo, isweydaarsigan ayaa ka dhigaya xoolo dhaqashada mid sahlan.
Eyga leh awoodda noocan ah ayaa ugu fiican gacanta milkiile khibrad leh. Heelers Buluug Australia ah ku barwaaqo hoggaamiye aqoon leh, firfircoon!
Ka fikir milkiilahaasi inuu adiga noqon karo Noo sheeg faallooyinka sababta adiga iyo Texas Heeler aad u tihiin kulan aad ufiican!
Hawlgab Dahab ah: Ma 'Eyga weligiisba' runbaa dhab ah?
Macluumaadka Taranka Jarmalka Adhijirka Wolf Mix, Sawirada & Qiimaha
Bichon frize iyo cavalier King Charles
giant alaskan malamuute full koray
magacyada eyda ee shaybaarada qalinka
Ammaan ma tahay in eeyaha la siiyo qaraha
magacyo fiican ee eeyaha waaweyn